Xog: Akhriso Amarka Lagu Joojiyay Diyaaradii Xaaf Keeni Lahayd Cadaado Oo Qoraal ah. – Hornafrik Media Network
Hay’adda Duulista iyo Saadaasha Hawadda ee Somalia (SCAMA) ayaa ku amartay Diayaraddii ka soo qaadi lahayd Hargayso Madaxwayne Xaaf inaysan ka dagi karin Magaalooyinka Cadaado iyo Gaalkacyo.
Email laga soo diray Xafiiska SCAMA oo ku saxiixnaa Maareeye Ku Xigeenka Hay’adda, Axmad Macalin Xasan, Isla markaana laga soo dhex diray Email-ka Rasmiga ah ee SCAMA ayaa lagu amray Xafiiska Hawlaha ee Shirkadda Bush Air Safaris in Diyaarada 5Y-GIG ee ka soo duuli lahayd Maanta Hargayso aysan ka soo dagi karin Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado, Sababo Farsamo.
Email-kan loo diray Diyaaraddii Waday Madaxwaynaha Galmudug oo ay heshay HornAfrika ayaa u sabab ahaa in Madaxwayne Xaaf uu Waqti badan Maanta ku xayirnaado Magaaladda Hargayso ee Maamulka Somaliland.
Amarka Dowladda Ee Diyaarada Xaaf Waday
Madaxwayne Xaaf ayaa markii uu ka soo dagay Cadaado ku eedeeyay Dowladda Somalia inay is hortaag ku samaysay Diyaaraddii u soo qaadi lahayd Cadaado, taasoo uu sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin.
Dowladda Somalia illaa iyo hadda faah faahin kama aysan bixin sababaha ay xanibtay Diyaaradda Xaaf keeni lahayd Magaaladda Cadaado.
HornAfrik: Warkan iyo Sawirka Email-ka ku dhex jira lama qaadan karo, iyadoo aan la xusayn Isha Warka oo ah HornAfrik.
Sarkaal ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka oo lagu dilay Degmada Waaberi.